Ulusu olomileyo ebusweni: Bona ezona ziLuleko ziLungileyo zi-7 kunye nezoLula ulusu
Ezona Ngcebiso zilungileyo zoKhathalelo koLusu oluLusu: Ulusu oluKhanyayo lukulindele
Ezona Ngcebiso zintandathu zilungileyo zokuKhathalelwa uLusu oluLusu: Ulusu oluKhanyayo lukulindele
Umthandi wobugcisa onomdla wokuthanda ifashoni kunye…
UNaomi Campbell: Ukwamkela i-50 | Usuku lokuzalwa olumnandi kwi-Icon
Ekanye emva kwethuba, siphawula ulusu olomileyo ebusweni bethu okanye amanye amalungu omzimba wethu abonakala kwisikali, emva koko sitsala umnxeba. Phola! Ulusu olomileyo luqhelekile kunokuba ucinga kwaye lunokwenzeka nakubani na kodwa into eqinisekileyo kukuba akufuneki ihlale injalo. ulusu olomileyo ebusweni
Ulusu olomileyo lunokubangelwa ziintlobo ezahlukeneyo zemiba engaphantsi, ukusuka kwimozulu ukuya ekwaluphaleni. Kodwa ngokuqinisekileyo ayisosigwebo sokufa okanye ububi obuyimfuneko. Ngokwazi ngakumbi into oyinxibayo, into oyidlayo kunye nento oyisebenzisayo kulusu lwakho, ulusu olomileyo lunokugcinwa lugqibile.
Gcina ulusu olomileyo lulusu kunye nezi ngcebiso zilula…
# 1. Ikhutshiwe
Xa unesikhumba esomileyo, ulusu lwakho luya kuhlala lubonakala sisikali kwaye Ukukhuphela ngaphandle kunceda ukukhuhla kunye nokususa iiseli zesikhumba ezifileyo zinika indlela entsha, ulusu oluqaqambileyo. Nakubeni kunokuba luncedo njengokuba kunokuba njalo, akuncedi ukuba ngaphezulu kakhulu. Kanye ngeveki kulungile.
# 2. Gxotha ulusu olomileyo
Gcina imali kwi-moisturizer elungileyo kwaye ufake isicelo emva kweshawari yokuphepha isikhumba esiqhekekileyo. Kubambisa umswakama kwaye kushiya ukuqina kwesikhumba.
# 3. Hydrate ukukhusela ulusu olomileyo
Sela amanzi amaninzi. Abasemagunyeni kwezempilo bahlala bancomela iglasi ezisibhozo zee-e-mail, ezilingana neelitha ezi-8, okanye iilitha ezi-2. ngosuku. Ukuhambisa amanzi okwaneleyo kunceda ukususa umzimba kwityhefu ekhokelela kulusu olomileyo kunye nokugcina ku ulusu oluqaqambileyo. Eli lelinye lawona manyathelo abaluleke kakhulu onokuwathatha ukuze ulusu lube ngcono. Ukuba uqaphela ukuba iiglasi ezisi-8 zamanzi azisisiki kuwe, ke yongeza enye ikomityi okanye ezimbini. Amanzi amaninzi akusela okungcono kulusu lwakho kodwa musa ukuwasela.
# 4. Kulumkele ukuhlamba ngamanzi ashushu
Ukuthambisa ngamanzi ashushu kuphinda kwome ioyile kulusu kwaye kuyishiya iye kwisikali. Amanzi afudumele lukhetho olungcono kwaye ungakulibali ukufaka umswakama ngokukhawuleza emva.
# 5. Nyusa
Iimpawu zokuphefumla zezona zibheji ezilungileyo xa kufikwa ekongezeni umswakama emoyeni. Kuyanceda ukunyanga ulusu olomileyo kwaye kunciphise iimpawu zomkhuhlane njengoko ulala ubusuku kude.
# 6. Nje "ioli" ulusu olomileyo kude
Sebenzisa i-coconut oyile kwisikhumba sobuso obomileyo, izithende eziqhekezayo kunye nomzimba wonke. Unokongeza iioyile zendalo ezinjengeoyile ye-avokhado emanzini akho okuhlamba. Oku kuya kunceda ulusu luphindise ioyile yalo yendalo kwaye ekugqibeleni lube nobulusu kwaye luxhase ukuchukumisa.
# 7. Nxiba kunye nemozulu engqondweni
Khusela isikhumba sakho xa imozulu imbi. Gquma ubuso bakho kwaye uphephe ukuhamba ixesha elide ebusika kwaye ukhusele izandla zakho ngokunxiba iiglavu ngexesha lokubanda. Kwakhona, zama ukungabhencisi ulusu lwakho phantsi kwelanga kwaye uhlala usebenzisa isikhuseli elangeni. Isiseko, khusela ulusu lwakho kwizinto zonke ngamaxesha onke.
Nokuba kwenzeka ntoni, ukuba nolusu olukhulu kunokwenzeka kodwa kufuneka ube unenjongo ngayo. Ke ukuzinyamekela kunye nokuqaqamba!
Iingcebiso ezi-7 eziLula kunye neziSebenzayo zeSikhumba esomileyo: #Ukukhanya
imozulu ebandayo isikhumba Ikhutshiwe Isikhuphi msi ofumisayo hydrate manzi Ioyile yendalo inkqubo yokhathalelo lwesono Ukhathalelo lolusu
Umthandi wobugcisa onomdla wokuthanda ifashoni kunye nokuhamba. Njengomntu onomdla malunga nenkqubela phambili yabasetyhini, ukudala umxholo okhuthaza ukuhlala ngokuchanekileyo kunye neendlela zokuphila ezitshintshayo kuluxanduva. KwiSitayile Rave, sijolise ekukhuthazeni abafundi bethu ngokubonelela ngesiqulatho sokuzibandakanya kungekuphela nje zokonwabisa kodwa ukukwazisa nokuxhobisa njengokuba nawe UYAZAZA ukuba nesitayile ngakumbi, uphile ngobuchule kwaye ube sempilweni. Silandele kwi-Instagram @StyleRave_ ♥
UVivian Bens-Patrick Ngamana 21, 2020
Ukuhlaziywa! Iindlela ezili-18 ezifanele ziRave | #SRCOTD
Ukuhlaziywa! Iindlela ezingama-26 zokuLityelela uBlowu luhlaza njengeNkwenkwezi yeSitayile | #SRCOTD
Ukuvuselelwa kokuhombisa: 17 Iindawo zokuPhila eziphefumlelwe nge-Afrika eziphefumlelwe-eUfanele ukubabona
Kule veki iphelileyo, uBuhle obuBalaseleyo ujonge ukusikhumbuza ngobuhle bohlukeneyo
I-Rave News Digest: Ini Edo iqala iNkqubo yokuXhobisa, e-States ukohlwaya abavoti beekholeji, uMatic + nangakumbi
U-Malia Obama Ujika ama-22 + ukuJongwa kweSitayile sakhe sokuBuya
Ukubhiyozela i-Octomom, uNadya Suleman nabantwana bakhe ngoku
7 Iingcebiso eziLula kunye neziSebenzayo zeSkincare zoLusu Olomileyo: #Ukukhanya
Iimbasa ezi-5 zokugqibela zeSipho soMama wakho
Ulwandle I-Moss yeyona nto Isisombululo uKim Kardashian Uthunyelwa Ngu
Izizathu ezi-4 zokuThunyelwa kweToni kufuneka ube unayo ukuba ufuna ulusu oluvuthayo